Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 3
Fiatrehana fifidianana atao…
Par Taratra sur 17/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Mafanafana ratsy indray ny tontolo politika amin’izao? Tsy mahagaga, mahazatra… Ankatoky ny fifidianana izao, ka samy manao izay ho afany sy efany amin’izay hiatrehana izany. Ny antoko na vondrona politika mpiray donak’afo omaly, ohatra, manomboka samy maka ho azy amin’izao: tsy ananan-kavana ny raharaham-pirenena amin’ny fakana fanjakana? Na samy te hitsapa hery, samy miady ho […]
Mbola tsy fandriampahalemana ihany…
Par Taratra sur 16/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
“Marefo ny fandriampahalemana”, ny sekreteram-panjakana misahana ny Zandarimariam-pirenena tany amin’ny faritra Analanjirofo, ny faran’ny herinandro teo. Hatramin’izao, ny tsy fandriampahalemana no anisan’ny fototra sy fositra mahasarotra sy mahamafy ary mahaela ny fampandrosoana ankapobeny. Tsy afa-mamokatra sy miasa araka ny tokony ho izy, ohatra, ny isan-tsehatra. Raha misy aza ny famokarana, ahina hanaovany sasany latsaka alina […]
Mba tsy ho fampandrosoana hosoka…
Par Taratra sur 15/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Misy ny mari-pahaizana hosoka, didim-pitsarana hosoka, bokin’omby hosoka… Matoa mahavoafitaka olona izany; eny, na tomponandraiki-panjakana aza: misy antony ao. Mety noho ny fisian’ny gaboraraka amin’ny sehatra na rafitra itrangan’izany, ka sahy sy vitan’ny ny olon-dratsy ny manao hosoka na sandoka? Na efa fahazaran-dratsin’ny sasany ny fanatanterahana asa: tsy misy fanaraha-maso, tsy misy fanavaozana na […]
Par Taratra sur 13/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Laingalainga, zava-dehibe ny fitanan’ny fitsarana am-ponja vonjimaika ireo miaramila 12 amin’ny 13, misy manamboninahitra voasaringotra amin’ny “Raharaha Bani Ivato”, izay nitranga vono ankizy tsy ampy taona. Inona ny marina? Ho hita eo ny tohiny sy farany. Ho fikarohana sy famoahana ny marina tokoa ny fitsarana? Mba tsy fampandriana adrisa ny raharaha; fa ny rariny, tsy […]
Tena misy ny gadra politika
Par Taratra sur 12/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Lasa resabe sy mahabe adihevitra ny sasany tato ho ato ny fisian’ny hoe gadra politika na tsia eto Madagasikara amin’izao. Noho ny fangatahan’ny filoha teo aloha iray izay: ny vitan’ny tena no ahina ataon’ny hafa? Na ny fomban’ny tena no heverina ho fanaon’ny hafa koa. Velona ho azy ny fanahiana amin’izany, fanomezan-tsiny, fitsaratsarana ivelany; […]
Aleo ny vahoaka no hitsara
Par Taratra sur 11/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa tena antomotra tokoa ny fifidianana? Indrindra ny fifidianana filohan’ny Repoblika… Amin’izao, misy indray ny mievotrevotra ambony ihany manome lesona amin’izay hitany sy heveriny ho lesoka. Tsy misy maharatsy izany. Iombonana sy tokony hampiombona mandrakariva ny tanindrazana, fa tsy an’ny irery. Na inona na inona koa mitranga sy atao, tsy ilaozan’izay mandilana hotentenina. Tsy […]
Par Taratra sur 10/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Amin’izao, sekoly roa no voatery nakatona mandritra ny 15 andro ao Morondava, faritra Menabe, noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19. Voafehy ny toe-draharaha? Na izany aza, tena mbola mila fitandremana. Fahavalo tsy hita maso ny tsimokaretina Conoravirus, tsy mampandre mialoha, tsy mifidy olona… Hampahatsiahivina indray ve izay nandritra roa taona latsaka niatrehana ny ady mivantana […]
Par Taratra sur 09/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy misy distrika hadino amin’ny hoe fampandrosoana ifotony amin’izao? Tsy misy fitsaharana, ohatra, ny fanorenana fotodrafitrasa: hopitaly manara-penitra, sekoly manara-penitra, tsena manara-penitra, kianja manara-penitra… Inona na ahoana koa? Misy ny efa notokanana, ao ny an-dalam-pamitana, tsy latsak’izany ny mbola kasaina. Be lavitra no ho izay natomboka sy vita mandrakariva ny tokony hatao. Eo ihany izany, […]
Fidinana ifotony… midi-droa
Par Taratra sur 08/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Mandeha ny fotoana, efa ho telo volana izao: mby aiza ny hoe fidinana ifotony? Tsy inona fa ny fijeren’ny tomponandraiki-panjakana ambony ny olana sy ny hetahetam-bahoaka, ny famahana sy ny famaliana izany. Eo ny vahoaka mahatsapa sy mitsara izay iainany: efa nisy tomponandraiki-panjakana ambony nijery ifotony ny olana ve? Na efa nisy famahana fahasahiranana sy […]
Par Taratra sur 06/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa ao anatin’ny vanim-potoana mialoha ny fampielezan-kevitra izao? Efa misy ny vondrona na antoko politika miomana amin’ny fiatrehana izany: manamafy sy manatevina ny ambaindain’ny antoko: manao kongresim-paritra, ohatra. Na ny mpanao politika mandeha irery amin’ny famadibadihana palitao aza, mitady izay hosarangotina. Tsy maintsy mahazo toerana na iza na iza eo amin’ny fitondrana? Tsy mitaingina soavaly […]
Par Taratra sur 05/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Ho amin’ny tombontsoam-bahoaka ny fanorenana fotodrafitrasa etsy sy eroa: hopitaly manara-penitra, sekoly manara-penitra, tsena manara-penitra, kianja manara-penitra… Marina sa tsy marina? Tsy vitan’izany, hampidi-bola ho ankolaka na mivantana ho azy koa izany. Ekena sa tsy ekena? Na izany aza, toa mitombo manaraka ny fitombon’ireny fotodrafitrasa aorina ireny koa ny fitsikerana ny amin’ny hoe tsy fitsinjovana […]
Par Taratra sur 04/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Hanao ahoana ny ho vokatry ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny fiatrehana ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetrandro? Ho hita eo… Tsy vao izao no nisy fikaonandoha toy izany; eny, na ny fehinkevitra tsara rindra amin’izany aza. Ny ataon’ny sasany ihany no ataony? Indrindra ny amin’ireo firenen-dehibe. Hatramin’izao, amin’ny ankapobeny, mihapotika fa tsy mihatsara aloha ny tontolo […]
Tsy fandriampahalemana… mila firaisankina
Par Taratra sur 03/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Tena mbola mampikaikaika ny vahoaka any ifotony amin’izao ny tsy fandriampahalemana amin’ny faritra sasany, indrindra amin’izay lavitra fanjakana. Tena manao ny ataony ny dahalo sy ny olon-dratsy. Na andro na alina izany, na any ambanivohitra na eny an-drenivohitra… Misy fahasahisahiana ratsy amin’ny fihantsiana vahoaka sy mpitandro filaminana. Nahoana? Mahery ny olon-dratsy fa manana fitaovam-piadiana mahery […]
Fitsarana itokisana… hitsarana mpitsara
Par Taratra sur 02/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Nahabe resaka ny adin-tany teny Fenoarivo: notanana am-ponja vonjimaika izy mianadahy tsy nanaiky hivarotra ny tany anjara lovany. Fivadiham-pitokisana no nanenjehana azy ireo. Misy kolikoly ny raharaha matoa misy fanerena hivarotra tany? Rehefa nohadihadina, natsahatra ny fanenjehana azy ireo. Tsara lavitra no ho ny hoe afaka madiodio izany, raha ny fanazavan’ny mpahay lalàna. Tsy tokony […]
Sisin-tany… mila iadiana sisina
Par Taratra sur 30/10/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny hazo no tapaka, ny sampany no miandany amin’ny vy. Ary ny trondro vaventy amin’ny asa ratsy tafaporitsaka amin’ny masona harato? Misy ny famelana malalaka amin’izay heverina ho mazava sy ara-dalàna izao noho ny henamaso na tsy fahalalana, na firaisana tsikombakomba noho ny kolikoly… Raha tsy izany, ny harato no tsy misy: tsy fahampian’ny fitaovana, […]
Par Taratra sur 29/10/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Noho ny tsy fahombiazan’ny rafi-panjakana efa mijoro amin’ny fanatanterahana asa, indrindra ny tsy fahatokisana azy: natsangana ny rafitra mirazotra hanao ny asany. Toy izany, ohatra, ny rafitra manokana misahana ny fifidianana: tsy fahatokisana ny minisiteran’ny Atitany, saika fitaovana politika eo an-tanan’ny kandidàm-panjakana izay tsy iza fa ny mpitondra. Toy izany koa, ohatra, ny rantsam-pitsarana manokana […]
Ao ny sendra taolana, ao ny sendra nofony
Par Taratra sur 28/10/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Afaka roa volana dia hivalona tanteraka ny taona 2021. Miriotra tsy azo tanana mihitsy ny fotoana nefa toa tsy maharaka izany fihazakazany izany ny zava-bita. Maro ny mety ho antony nahatonga izany, saingy samy mila mizaka ny anjarany ny tsirairay satria ao ny sendra taolana, ao ny sendra nofony. Tsy vitan’ny tranga lela intsony ny […]
Fidinana ifotony sy fiakarana an-tampony
Par Taratra sur 27/10/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Mandeha ny fotoana. Ary ny fampandrosoana? Amin’izao, mby aiza ilay hoe fidinana ifotony takina amin’ireo tomponandraiki-panjakana ambony isan-tsehatra amin’ny famahana olana, fihainoana ny hetahetam-bahoaka, fijerena akaiky ny fanatanterahana sy famitana asa… Misy ny efa nanao ary tsy mijanona amin’ny fanohizana izany. Ao ny nanao fa toa am-boalohany ihany… Mbola mitady vahaolana na paikady ho tsaratsara […]
Par Taratra sur 12/10/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Vanim-potoana mialoha ny fifidianana izao. Efa misy ny antoko na vondrona politika miomana amin’izany? Ady fiady io, samy manao izay afany sy efany. Tato ho ato, saika tsy misy fiatoana ny fametrahan’ny fitondram-panjakana vatofehizoro amin’ny fanorenana fotodrafitrasa etsy sy eroa, ny fitsidihana ny fandehanan’ny asa natomboka na an-dalam-pamitana azy, ny fitokanana zava-bita. Misy mahita fa […]
Par Taratra sur 09/10/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
“Raha misy mangataka trondro, omeo fintana han­jo­no­any”, hoy ny fitenenana malaza iray izay. Zava-dehibe ny fi­fa­nampiana, tsy mahasaraka amin’ny maha olombelona: velon-kifanampy sy hifanasoa, indrindra raha hoe mpiray ta­nindrazana. Vao mainka fa izay manana ady iombonana sy mampiombona: ady amin’ny fahantrana, lehibe sy maika amin’izao. Izay no fanomezan-tanana amin’ny fanampiana. Saingy fanampiana tsy hahatonga fahazaran-dratsy […]
Mahavoa na voa roa…
Par Taratra sur 08/10/2021 Edito Taratra, NS Français
Efa ao anatin’ny hoe vanim-potoana mialoha ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana izao? Ady fiady, fanararaotra… Ao ny efa manoman-tena na miomana amin’izany, na efa ao anatiny aza. Misy ny mahita sy milaza fa naman’ny efa mby amin’izany na efa ao anatin’izany ny eo amin’ny fitondrana na ny mpanohana azy? Misesisesy, ohatra, ny fametrahana vatofehizoro amin’ny fanorenana […]
Par Taratra sur 07/10/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Halatra sy fandrobana, fakana takalon’aina, fandravana sy fandoroana tanàna… Inona koa? Vaky trano, fanendahana, harom-paosy…. Sanatria, toy ny efa mahazatra sy fiainana andavanandro ny tsy fandriampahalemana etsy sy eroa amin’izao? Indrindra tato ho ato izay… Na izany aza, mila vahaolana haingana sy maharitra. Tsy takona afenina fa hoe mirongatra ary mitombo ny tsy fandriampahalemana? Fanambin’ny […]
Par Taratra sur 06/10/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Anisan’ny mahasarotra sy mahamafy ary mahaela ny fampandrosoana eto Madagasikara ny tsy fanarahan-dalàna. Matoa fanamby amin’izao ny hoe fanjakana tan-dalàna, mbola misy gaboraraka? Tsy mbola mety ho fomba fiaina sy kolontsaina mandeha ho azy ny fanarahan-dalàna. Na mijanona ho fahatahorana mpitandro filaminana, fitsarana, fanasaziana na fonja… Eny, ny ho afa-baraka aza raha tratra na fantatra. […]
Par Taratra sur 05/10/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Mbola momba ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana ihany… Tsy mampilamina! Tsy azo odian-tsy hita, na ndeha havela amin’izao. Tsy maintsy resahina fa tsy mankaleo, tsy mandreraka, tsy mahakivy. Miantoka ny zava-drehetra ny fandriampahalemana sy ny filaminana: ny fiatrehana ny fiainana andavanandro, ny fampandrosoana… Mampanontany tena amin’izao izay mampirongatra etsy sy eroa ny tsy fandriampahalemana tato […]
Mpanohitra… mitondra fanovana
Par Taratra sur 04/10/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Miova mpitondra, miova sata? Miova ny fijery amin’izany, ny fomba fiasa, ny olona miasa, ny asa atao… Efa mby amin’izany amin’izao? Anisan’izany, ohatra, fanamby hoe tsy misy distrika hadino na tavela amin’ny asa fampandrosoana. Omena vola enti-mihetsika sy miasa ny isam-paritra, fitaovana vaventy hanamboaran-dalana… Tsy hafa amin’izany koa ny masontsivana tamin’ny fanendrena tomponandraiki-panjakana ambony: manana […]